युनाइटेड फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, १४ असोज २०७६)
युनाइटेड फाइनान्सले गत आव २०७५/७६ मा रू. १३ करोड ३२ लाख ५२ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रू. ७ करोड ९ लाख २ हजार थियो । गत आवमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ८ करोड १० लाख ४८ हजार रहेको छ । कम्पनीले गत वर्षको लाभांश हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १ करोड ५ लाख १९ हजार छ । जगेडा कोषमा रू. २२ करोड ३३ लाख ५८ हजार रहेको कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको यो कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १५ दशमलव ८४ रहेको छ । सोमवारको कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १८२ कायम भएको छ । यस दिन ९ अंकले मूूल्य बढेको हो ।
2019-10-01 - 197 view(s) - abhiyandaily